In dad Soomaali ah oo Diinta ka baxay ay Masaajid gudihii kula saxaroodaan Kitaabka Qur’aanka Kariimka ah, waa arin cusub oo aanan horey u dhicin, hayeeshee marka laga hadlayo tacadiyada ka dhanka ah Diinta iyo ehelkeeda waxaa la dhihi karayaa, waa kuwa soo jireen ka ah dalka Soomaaliya.Haddaan kasoo qabano horraantii 1970, Madaxweynihii dalka ka talinayay ee Maxamad Siyaad Barre, ayaa waxa uu si...
Suurada 100 aad Al-Caadiyaat: Suuradan waa Makiyah, Cadadka Aayadaheeduna waa 11 Aayadood, waxeyna soo dagatay Suurada Al-Casri kadin, Musxafkana waxey kaga Beegan tahay Dhamaadka Juzka 30aad. Macnaha Guud ee Suurada Al-Caadiyaat: Suurada waxey si Guud u tilmaantaa Arimaha soo socda:1- Jihaadka in looga Baahan yahay Qalab iyo Hub in loo diyaarsado inta aan la Galin, Farduhuna waxey ka Mid yihiin...
Suurada 93aad Ad-Duxaa: Suuradan waa Makiyah, Cadadka Aayadaheeduna waa 11 Aayadood, waxeyna soo dagatay Suurada Al-Fajri ka dib, Musxafkana waxey kaga Beegan tahay Dhamaadka Juzka 30aad. Macnaha Guud ee Suurada Ad-Duxaa: Suuradan waxey Guud ahaan ka hadashaa Nabi Muxamad (Scw) Nicmooyinka la siiyay Aduunka iyo Aakhirabadaba, si uu Allaah ugu Shukriyo Nicmooyinkaas, waxaana Nicmooyinkaan Nabiga...
Suurada 78aad An-Naba’: Suuradan waxa loogu Magac daray An-Naba’ si ay Dadka u Xasuusiso weynida Akhabaarta Qur’aanka Xambaarsan yahay, waxaa kaloo yaqaan Camma oo ah kalimada ay ku Bilaabato. Suuradan waa Makiyah, Cadadka Aayadaheeduna waa 40 Aayadood, waxa ayna soo Dagatay Suurada Al-Macaarij ka dib, waxa ayna Musxafka kaga Beegan tahay Biloowga Juzka 30aad. Macnaha Guud ee Suurada An-Naba’: Suuradan...
Suurada 73aad Al-Muzammil: Suuradan waxaa loogu Magac daray Al-Muzammil, maadama ay ku Bilaabatay Naadin ku Socota Nabiga asagoo Go’ ku Duubduubnaa mar uu ka naxay biloowgii waxyiga, ayaa Allaah ugu yeeray oo ugu Naabiyayay Al-Muzamil. Suuradan waa Makiyah, Cadadka Aayadaheeduna waa 20 Aayadood, waxa ayna soo dagatay Suurada Al-Qalam ka dib, waxa ayna Musxafka kaga Beegan tahay Bartamaha Qeybta...
Sideen u Fahamnaa Quraanka? Q:21-aad
Suurada 72aad Al-Jinni: Suuradan waxaa loogu Magac daray Al-Jinni Maadaama si aad ah ay uga Sheekeyso Jinniga Makhluuqa la yiraahdo, Jinniga waa Qeyb ka mid ah Uunka Caqliga lagu Beeray waxaa uuna Mukulaf u yahay Sida Insaanka oo kale waana Xaqiiq jiritaankiisa. Suuradan waa Makiyah, Cadadka Ayadaheeduna waa 28 Aayadood, waxa ayna soo dagatay Suurada Al-Acraaf ka dib, waxa ayna Musxafka kaga Beegan...
Sideen U Fahamnaa Quraanka? Q: 14aad
Suurada 43aad Az-Zukhruf: Suuradaan waxaa Loogu Magac daray Az-Zukhruf oo Macnaheedu yahay (Dhaldhalaal) maadama ay Suurada Aduunyada iyo Raaxada Dhax taala ku Shabahday Dhaldhalaal Been ah oo lagu Dagmo. Suurada Makiyah marka laga Reebo Aayada 54aad, Ayadaheeduna waa 88 Ayadood, waxa ayna soo Dagatay Suurada Fussilat ka Dib, Juz ahaana waxa ay ku Beegan tahay Bartamaha Juzka 25aad. Macnaha Guud...
sideen u fahamnaa Quraanka? Q: 12aad
Suurada 30aad Al-Ruum: Suurada Al-Ruum si ay Xasuus ugu Noqoto Mucjazadii Qur’aanka uu Alle (Cw) ku sheegay oo aheyd Guul Mustaqbalka Dhaw ay gaari Room xili Markaas waqti ka hor lagu jabiyay Dagaal ay la Galeen Boqortooyadii Faaris (Beershiya). Labadan Qolo ee Ruum iyo Faaris waxa ay ahaayeen laba Boqortooyo oo Aduunka Xiligaas ugu Awooda Roonaa isla markaana waxaa ka Dhaxeeyay Hardan Xaga Awooda...
Sideen u Fahamnaa Quraanka? Q: 8aad
Suurada 9aad Al-Towbah: Suuradan Al-Atowbah waa Suurada 9aad ee Musxafka Qur’aanka loo eego, waxaana Magacaas loogu Magacaabay in Koox Muslimiinta ka mid ah ay ka hareen Duulaankii Tabuuk ayadoo aysan jirin sabab Sharci ah oo ay uga maqnaadaan Duulaanka, Markii Nabiga ka soo laabtay Tabuuk ayaa qaar kuwii haray ka mid ah u Cudur daarteen oo Been Sheegeen, hase yeeshee Sadax Saxaabi oo kala ah:Kacab...